သင့်ကားကိုအဝေးတစ်နေရာတွင်နေရာချပါ - သိကောင်းစရာများ - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ »သင်၏ကားကိုအဝေးတွင်နေရာချပါ - သိကောင်းစရာများ
ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ကား Locate - သိကောင်းစရာများ
ကားသည်အိမ်ယာပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးအိမ်ထောင်စုအသုံးစရိတ်ဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ခိုးမှုသည်အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုအနေဖြင့်နေထိုင်သည်။ GPS ဖြင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ရှာဖွေရန်လွယ်ကူပြီးယခုအခါယာဉ်အများစုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ သို့သော်ခိုးယူမှုတွင်ကားအနည်းငယ်သာ geolocated ခံရရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တုန့်ပြန်ချက်သည်ဈေးကြီးသောကြောင့် 3G သို့မဟုတ် 4G ဆက်သွယ်မှုသည်ဒေတာကိုဆာဗာသို့ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဖြစ်ပါသည်အရာများ၏အင်တာနက် (IoT, Internet Of Things) သည် LoRa နှင့် Sigfox ကွန်ယက်များကြောင့်အရာဝတ္ထုငယ်များသည်ဒေတာများကိုဈေးသက်သာစွာဖြင့်ထုတ်လွှင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အဘယ်အရာကို LoRa / SigFox?
LoRa SigFox နှင့် LPWAN ကွန်ရက်များ (အနိမျ့ပါဝါ Wide Area Network ကို, ဒါမှမဟုတ်တာဝေးပစ်နိမ့်လျှပ်စစ်ကွန်ရက်) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း, ပြောဖြစ်တယ်, သူတို့ကအရမ်းကြာမြင့်စွာဝေးကွာကျော်အချက်အလက်များ၏အားလုံးအသေး packets တွေကိုပြန့်နှံ့ကူညီပေးသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, နှစ်ဦးစလုံးကွန်ရက်များအင်တာနာ၏ကွန်ယက်၏သိပ်သည်းဆပေါ်မူတည်ပြီးမီတာခန့် 20 100 မီတာနှင့် SigFox ကီလိုမီတာ၏ LoRa အကွာအဝေး 10 မှ 1 တစ်ခုတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူဂျီပီအက်စ်များအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲတည်နေရာတစ်ခုစနစ်,, ကိုဆက်ကပ်။ LoRa ပြင်သစ်လူဦးရေရဲ့အကြောင်းကို 95% ကိုဖုံးလွှမ်း။
Roadie invoxia ကြေးပေးသွင်းခြင်းမရှိဘဲနှင့်အထိ 8 လအကွာအဝေးသည်၎င်း၏တည်နေရာအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်များကိုရန် LoRa ကွန်ယက်ကို အသုံးပြု. ၎င်း tag ဖြစ်ပါတယ်။ 99 ယူရိုစျေးကွက်ကြောင့်3အစောပိုင်းနှစ်တာကာလအတွင်း (ကြေးပေးသွင်းခြင်းမရှိဘဲ, မိုဘိုင်း application ကိုမှတဆင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုတစ်ဦးသိုလှောင်မှုအခန်းတွင် "မေ့လျော့" နိုင်သည့်တစ်ဦး Stabilo အမှတ်အသား၏အရွယ်အစားမှာ object တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ) ။
ပိုများသောဂီယာအကြိမ်ရေချပိုမိုမြင့်မားမိမိကိုယ်ကိုပေမယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးယာဉ်ရုံမဟုတ်တော့ရန်ရှိသည်မှ load အပြီးအပိုင်ကစွန့်ခွာ, တစ်ဦးကို USB သို့မဟုတ်တစ်ကားကိုအားသွင်းတပ်ဆင်ထားသည်အဖြစ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြဿနာ။
ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာမှတဆင့်ကအစစ်အမှန်အချိန်အနီး tag ကို၏လှုပ်ရှားမှုတွင်စောင့်ကြည့်တည်နေရာသမိုင်းကိုကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ဧရိယာထဲက tag ကိုသို့မဟုတ်အခြားထဲသို့ဝင်သောအခါသတိပေးချက်များကိုတင်ထားရန်ဖြစ်နိုင် ဧရိယာ။
လျှောက်လွှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် tag တစ်ခုကိုထည့်ပြီးအမည်တစ်ခုပေးသည့်အရာဝတ္ထုအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ၎င်းသည်အမှတ်အသားနှင့်မော်ဒယ်ကိုသာပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲကားတစ်စီးဖြစ်သည်ကိုမဖော်ပြခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လျှောက်လွှာကိုဖောက်ထွင်းခံရပါကစနစ်သည်ဆန့်ကျင်။ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီတိကျတဲ့မော်တော်ယာဉ်များနေရာချထားရန်ခွင့်ပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် "Object" အမျိုးအစားကိုထားခြင်းနှင့်ကြားနေအမည်ပေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းအနက်မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ဥပမာလိုင်စင်ပြား၏ပထမသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးဂဏန်းများ။
ယူရို 99 အတွက် entry ကိုစျေးနှုန်းနှင့်တကွ, tag ကိုနေတုန်းပဲအများဆုံးဘတ်ဂျက်များအတွက်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သတငျးကောငျးမျှ subscriptions ကိုရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအခြားကစားသမားဒီကဏ္ဍမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့နေရာချလိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်စျေးနှုန်းကျဆင်းသဖြင့်လိုက်ပါသွားပါလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်။ ။ သုံးစွဲသူများထံမှကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းသည် capricious ဖြစ်နိုင်ပြီးလိုချင်သောကြိမ်နှုန်းဖြင့်နေရာကိုသေချာပေါက်မဖော်ပြနိုင်ပါ။
ဤဆောင်းပါးအားဖြင့်မှန်မှန်မွမ်းမံ ကျွမ်းကျင်သူများက အဆိုပါအောက်မှာ
ဦးတည်ချက်က de Jean-François Pillouတည်ထောင်သူ Kioskea
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Figaro အုပ်စုနှင့်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ။
6 ၏အင်္ဂါရပ်များ - အမျိုးသမီးများအားသိပ္ပံပညာပြီးနောက်ယောက်ျားများကိုမခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောကျန်းမာရေး - PLUS MAG